Mahavariana Indrindra fiarovana tany Alemaina | Save A Train
Home > Travel Europe > Mahavariana Indrindra fiarovana tany Alemaina
Fotoana famakiana: 3 minitra(Last Nohavaozina: 25/01/2021)
Alemaina dia firenena mazava ho tsara tarehy. Fa rehefa anao hieritreritra lapa, no ho tia azy bebe kokoa. Ary izany rehetra izany, satria Alemaina no, araka ny maro, ny lapa renivohitry ny izao tontolo izao.
Misy maro be rehetra any Alemaina mampitolagaga lapa tokony hitsidika. Ao amin'ity lahatsoratra ity, Ho isika hifantoka amin'ny tsara tarehy indrindra ihany ny olona teo aminy. Ihany koa izahay hanome anao Info momba ny fomba azonao atao mahatratra izany lamasinina, ny Sitraky ny fiaran-dalamby rehetra tia!
Schloss Neuschwanstein - Mahavariana Indrindra Castle any Alemaina
Maro no mahafantatra ny aminy ho iray amin'ireo lapa tsara tarehy indrindra amin'izao tontolo izao, tsy hoe Alemaina. Raha tsy izany, fa malaza tokoa noho ny aingam-panahy ho an'ny Disney Castle. Rehefa hojerentsika ity angano lapan'ny, ianao tonga saina ny antony. Afaka mahatakatra ny antony tokoa izany eo amin'ny lapa mampitolagaga indrindra any Alemaina!
Schloss Neuschwanstein dia isalasalana fa malaza, Ahoana anefa no tonga any? Ny zavatra tsara momba an'i Alemaina dia maro ireo toerana mifandray amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby. Ny akaiky indrindra fiantsonan'ny fiaran-dalamby ho any anati-dia ao Fussen. Na izany aza, dia afaka tonga amin'izany toerana avy Munich na hafa lehibe tanàna alemà.
Hohenzollern - Indrindra mahagaga Castle any Alemaina
Hohenzollern lapa dia tsy mampitolagaga indrindra teo amin'ny lapa any Alemaina - izany indrindra mahagaga iray. Afaka hahitanareo azy any an faritanin'i Baden-Württemberg, akaikin'i Stuttgart. Baden-Württemberg faritany no tena underrated ny iray tany Alemaina, fa indray mandeha hitanao io lapa, ianao maintsy hanova ny hevitrao!
Na izany aza, mahazo ho any anati-dia mety ho olana, sira mbola mendrika izany tanteraka. Ny fomba tsara indrindra dia ny haka ny fiaran-dalamby avy any Stuttgart ho Hechingen. Avy eo dia mila maka ela fitsangantsanganana sy mananika amin'ny hantsana fiakarana ho tonga any anati-. Mananihany fotsiny aho! Azonao atao ny maka fiara fitaterana mivezivezy na taxi avy Hechingen tahaka ny lapa dia tena akaikin'ny tanàna.
Hohenzollern Sigmaringen - The lehibe ao Castle any Alemaina
Ao amin'ny heviny feno fanetren-tena, tsy misy lisitry ny lapa mampitolagaga indrindra any Alemaina mety ho tanteraka raha tsy misy io Hohenzollern Sigmaringen. Izany no be indrindra sy lehibe ao lapa ve ianao hametraka ny masonao! Ary raha izay tsy ampy, izany ihany koa mahatalanjona tokoa.
Hohenzollern-Sigmaringen àry any Baden-Württemberg; noho izany dia tanteraka saro-takarina hoe nahoana ny olona no tsy nidera ny faritany ho toy ny tsara indrindra iray tany Alemaina!
Raha ny mandeha - satria afaka mahita ny trano mimanda ao amin'ny tanàna, fa mora lamasinina. Ny fomba tsara indrindra dia ny haka ny lamasinina avy any Ulm na Stuttgart ary avy eo dia mandeha ho any anati-.
Frankfurt ho Ulm Lamasinina
Stuttgart ho Ulm Lamasinina
Leipzig any Ulm Lamasinina
Nuremberg ho Ulm Lamasinina
Anati-rova Paoly mijoro irery amin'ny havoana kely, Ary toa tena mahatalanjona. Na izany aza, fa tsy toy izany indray mandeha irery ianao tafiditra ao fa mbola misy mponina! Eny, ny Eltz family no natao ny trano mimanda ho an'ny 33 taranaka!
Raha ny mahazo any, dia tsy maintsy mandeha na hahazo fiara fitateram-bahoaka na Taxi from Hatzenport. Na izany aza, fa azo atao ny mahazo tanteraka any amin'ny tanàna kely lamasinina avy Koblenz - ny tanàn-dehibe akaiky indrindra.
Frankfurt ny Hatzenport Lamasinina
Bonn any Hatzenport Lamasinina
Cologne any Hatzenport Lamasinina
Dusseldorf ho Hatzenport Lamasinina
Ary any no manana izany, tanteraka lisitry ny lapa mampitolagaga indrindra any Alemaina. Manantena izahay fa hitsidika ianao, fara fahakeliny, ny iray amin'izy ireo eo amin'ny diany manaraka! Raha te-hahafantatra bebe kokoa momba nandeha lamasinina ireo lapa, dia aza misalasala Mifandraisa aminay na oviana na oviana.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-spectacular-castles-germany%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#Alemaina trano fiarovana europetravel trainjourney Tranride fiaran-dalamby soso-kevitra Travel travelgermany